Inku dhow labo boqol oo carruur agoon ah oo dhar ay ku ciidaan loogu qeybiyay degmada Balcad - Jowhar Somali news Leader
Home News Inku dhow labo boqol oo carruur agoon ah oo dhar ay ku...
Inku dhow labo boqol oo carruur agoon ah oo dhar ay ku ciidaan loogu qeybiyay degmada Balcad
Inku dhow labo boqol oo carruur agoon ah oo ku nool degmada Balcad ayaa loo qeybiyay dhar ay ku ciidaan munaasabada Ciidul fitriga oo fooda nagusoo heysa.
Agoonta loo qaybiyey dhar ay ku ciidaan oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa wajiyadooda waxaa ka muuqatay farxad iyo reynreyn, waxayna ehelada carruurta ka mahadceliyeen deeqda dharka ah ee la soo gaarsiiyay, iyagoo ka codsaday dadka hantida Alle siiyay inay kaalmeeyaan agoonta iyo dadka danyarta ah.
Xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo hormuud ka ahaa qeybinta dharkan ciidda ah ayaa u mahadceliyay qaar ka mid ah jaaliyada reer Balcad ee ku nool qaarada Yurub gacantii ay ka geysteen sidii ay caruurtan agoonta ah u heli lahaayeen dhar ay ku ciidaan.
Xasan Maxamed Xaaji Qoobey oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ahna nin beeralay ah caan ka ah degmada Balcad ayaa sheegay in sababta uu ugu iibiyay carruurtan dharka ciida inay tahay in uu Alle ajar ka siiyo.
Proff Maxamed Xuseen Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada degmada Balcad oo goobjoog ka ahaa qeybinta dharka ciidda ayaa sheegay in Alle ajar iyo xasanaad uu ka helayo qofkii u gargaara agoonta waxana ay ku tilmaameen tallaabada uu qaaday Xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji inay tahay mid ku dayasho leh,iyagoo sheegay in barnaamijyo badan oo dhinaca horumarka ah uu ka qabtay xildhibaanka degmada Balcad.
carruur loo iibiyay dhar ay ku ciidaan degmada balcad